အချစ်ကို ရင့်သန်စေသော မှော်နည်းလမ်းထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤနည်းလမ်းသည် စိုးရိမ်စိတ်၊ကြောက်ရွံ့ စိတ်များခံစားနေမှုကို မျှဝေခံစားပေးသော၊ တစ်ဖက်သားအား အလွယ်တကူချစ်မြတ်နိုးစေသော အရာဖြစ်ပါတယ်။。
ယခုတစ်ကြိမ်ကတော့ဟု စိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီး အမြင့်ဆုံးစွန့် စားမှု (အနည်းငယ်အန္တာရယ်ရှိသော ရှူခင်း) နဲ့ စွတ်ရိဘရှိ၏အစွမ်းကို အကျိုးရှိရှိအသုံးပြုပါ။ တစ်ကြိမ်တည်းမှာ မိမိသဘောကျနေသောသူနှင့် နီးကပ်စေချင်ကြတယ်မဟုတ်လား
သေချာတာကတော့ စုံတွဲဆိုပါက ပို၍ချစ်ခြင်းက နက်ရှိုင်းလာမည်မှာ သေချာပါသည်။♡
ပိုပြီးချစ်စေချင်သော်လည်း ကြောက်လို့ ဟုဆိုသော သင်ကို တစ်ကြိမ်တည်းဖြင့် သဘောကျစိတ်ကျေနပ်စေရန် ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ (နှလုံးခုန်နှုန်းမြန်ဆန်စေသောအဆင့်) ထိရောက်အောင် မိတ်ဆက်ပေးပါမည်။
ရေနွေးငွေ့ ဖြင့်ပြေးဆွဲသော ရထားပါပြေးဆွဲသော ဒီအိုအိဂဝရထားလမ်း
ရှေးဟောင်းဖြစ်ပြီး ချစ်စရာကောင်းသောရထားတွဲ၊ များစွာသောရှု့ ခင်းများကြားထဲမှ ပြေးဆွဲသောရထားလမ်းဆိုသော်လည်း (အိုခုအိုအိသက်တန့် ရောင်တံတား) ဆဲဆိုကရောရေလက်ကြားကို ဖြတ်သန်းသည့်အချိန်တွင် ပြတင်းပေါက်မှ ကြည့်ရသည်မှာလည်း အနည်းငယ် အန္တရာယ်ရှိသည်။
ပြုတ်မကျပါဘူးဟု သိနေပါသော်လည်း သေးငယ်သောရထားလမ်းပေါ်တွင် ပြေးဆွဲသည့်အချိန်ကတော့ နှလုံးခုန်သံများက အနည်းငယ်မြန်လာပါသည်။ အနည်းငယ် ရင်တစ်ဒိတ်ဒိတ်ဖြစ်ခြင်းကို ခံစားရစေမည့် နေရာဖြစ်ပါသည်။
ကိုယ်တိုင်လမ်းလျှောက်သွားနိုင်သည်အထိမြင့်သောနေရာကိုသွားရန် သတ္တိမရှိသောသူများအတွက် အိုးအိဂဝရထားလမ်းတွင် ရင်တစ်ဒိတ်ဒိတ်ခံစားမှုကို ခံစားကြည့်စေချင်ပါသည်။
နွယ်ပင်တစ်မျိုးဖြင့် ကွန်ယက်ထားသော တံတား။ မဟုတ်မှလွဲရော ပြတ်ကျသွားနိုင်တယ်မဟုတ်လား ဟု တွေးရင်းဖြတ်သန်းရခြင်းသည် တော်တော်လေးကို စွန့် စားလုပ်ကိုင်ရခြင်းမျိုးဖြစ်ပါသည်။
ခြေထောက်နင်းသောနေရာများလွဲသွားပါက ပြုတ်ကျသွားနိုင်သလိုဖြစ်နေပြီး တစ်လှမ်းချင်း တစ်လှမ်းချင်းကို သေချာဂရုစိုက်စွာ လှမ်းရုံကလွဲပြီး မရှိပါ။
ထပ်ပြီး ဒီတံတားမှာ တစ်လမ်းသွား ၊ခြေလှမ်းတစ်လှမ်းလှမ်းမိပါက နောက်ပြန်လှည့်လို့ မရနိုင်တော့ပါ။ ကျဉ်းမြောင်းသော ခြေနင်းနေရာကို မြန်မြန်ရှေ့ ဆက်သွားရုံမှ လွဲပြီး မရှိပါ။
အပြာရောင်မြစ်ပေါ်တွင်ထိုးထားပြီး ကမ္ဘာတွင်လည်း လူကြိုက်များသော အဓိကအချက်မှာ ဒီနေရာပါ။ နောက်ပြီး ဓာတ်ပုံကို သေချာကြည့်ပါ။
နောက်ပြီး ဓာတ်ပုံကို သေချာကြည့်ပါ။
သေးငယ်သောသစ်ပင်ကို ဖြတ်လျှောက်ရန်ပျဉ်ပြားအဖြစ်လုပ်ထားသော ဒီဟာ ကဒီတံတားရဲ့ လျှောက်လမ်းလား
တံတားပေါ်တွင် လှုပ်ရှားနိုင်သောနေရာအနေအထားမှာ ပျဉ်ပြားနှစ်ချပ်စာသာသာခန့် သာရှိသော နေရာ။ ကျဉ်းသောလမ်းတွင် နှလုံးခုန်သံကလည်း အမှတ်မထင် မြန်လာမည်ထင်ပါတယ်။
တံတားအလယ်မှာ မိန်းမငယ်လေးဟာ အချစ်အတွက်ဆုတောင်းမယ်ဆိုပြည့်လာမယ်
သို့ သော် လှုပ်နေသောတံတားကျဉ်းလေး အလယ်တွင် ဆုတောင်းမှုကို ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကိုးထပ် အိပ်မက် တံတားကြီးး
ဒီတံတားသည် မည်သို့ ပင်ဆိုစေမြင့်သည်။ မြစ်အောက်ခြေမှ အမြင့်ဆိုပါက ၁၇၃ စင်တီမီတာ
ခြေနင်းများကြားမှာ တိုက်ခတ်လာသောလေ! ဒီအမြင့်မှာရှိနေသော တံတား!
တစ်စက္ကန့် ပဲဖြစ်ဖြစ်အောက်ကို ကြည့်ပါက လမ်းလျှောက်ခြင်းက ရပ်တန့် သွားကောင်းသွားမည်။
ခြေနင်းအလယ်တွင် အနည်းငယ်နေရာဟနေပြီး ကြားထဲမှ အနည်းငယ်မြင်တွေ့ လိုက်ရသော မြစ် ( စွတ်ရိဟရှိအစွမ်း) ကို မြန်မြန်လျှောက်သွားကြပါမည်။
မီယောရှိ အပေါ့သွားနေသော ကိုရင်လေး
ပီးတော့ အကြီးမားဆုံးအခက်ခဲက ဒီ ( မီယောရှိ အပေါ့သွားနေသော ကိုရင်လေး)!
ချိန်းတွေ့ တာဖြစ်ပါလျက် ဒီအပေါ့သွားနေတဲ့ ကိုရင်လေး လား ဟု ထင်ကောင်းထင်နိုင်သော်လည်း ဒီနေရာကိုရောက်လာပါက ထိုအရာများကို ကြောက်ရွံမှု့ က မေ့သွားစေပါလိမ့်မယ်။
အရံအတားတစ်ခုမှမရှိသောနေရာတွင် မတ်တတ်ရပ်နေသောရုပ်တုအား ချဉ်းကပ်ပါက ချဉ်းကပ်သလောက် ရင်တုန်မှုက မြင့်လာပါမည်
ခြေတစ်လှမ်းလွတ်သွားပါက ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေသော ခြေနင်းပြားများ သင်ရော ၊သူ ၊ သူမရော နှလုံးခုန်နှုန်းက အမြင့်ဆုံး!
အမြင့်ကြောက်သောသူများအတွက်ကတော့ တစက္ကန့် လောက်ဖြင့် မျက်စိမှိတ်ထားချင်လောက်သောရှု့ ခင်းများ!
လှပသော်လည်း သတ္တိရှိမှုလိုအပ်သော လည်ပတ်စရာနေရာ ၅ခုထဲတွင် စွတ်ရိဘရှိသည် အကောင်းဆုံး!
ရင်တစ်ဒိတ်ဒိတ်ခုန်မှုက မြင့်လာလျှင် မြင့်လာသလောက် စွတ်ရိဘရှိတံတား၏အစွမ်းလည်း မြင့်လာပါမည်။
ဒီနှစ်နွေရာသီကတော့ အေးမြပြီး အန္တရာယ်ရှိသောနေရာတွင် ချစ်ခြ င်းရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်မည်မှာ အသေအချာပဲဖြစ်ပါသည်။